Zokiolona Koreana Manao Ankivy Ny McDonald Ary Maka Ny McResolution · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2014 7:05 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Italiano, 한국어, Français, English
Lohateny lehibe tamin'ny gazety tao New York City ireo Koreana Zokiolona noho izy ireo mitoko-zihitra isanandro ao amin'ny McDonald's, manomboka ny maraina be ka mandra-pahamaizin'ny andro, manafatra ovy voaendy na kafe fotsiny. Taorian'ny nandroahana azy ireo fa hoe manelingelina ny asa fandraharahana, niantso fanaovana ankivy an'ilay trano fisakafoanana ny sasany tao anatin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo Koreana.
Nahoraka be nandritry ny faran'ny herinandro ny tantaran'ny New York Times momba ireo zokiolona mpibodo teo amin'ny McDonald's, ary dia nihetsika haingana ny McDonald's, namono ny afo nony Alatsinainy, tamin'ny nametrahany ny “McResolution!“. Nampanantena ora misimisy kokoa ho an'ireo zokiolona ry zareo mandritra ny ora tsy dia mahabe olona ary hifampiraharaha amin'ireo akanin'ny zokiolona mihitsy aza mba hisian'ny fitaterana mandroso sy miverina mankao amin'ilay trano fisakafoanana.
Apetrak'ireo mpampiasa tranonkala amin'ny Fikambanan'ireo Ray Aman-dreny Koreana ao New York ny ahiahy – vondrona iray izay tompon-kevitra tamin'ilay fanaovana ankivy sady manontany raha tena mendrika hofidiana hisolo tena ny vondrom-piarahamonina Koreana amin'ny ankapobeny tokoa ry zareo ireo. Ny sasany avy ao amin'ilay vondrona, indrindra fa ilay ramatoa mpitondra teny, dia ampangaina ho mpiandany fatratra amin'ny elatra farany havanana izay nisakana tamin'ny fomba tsy lanin'ny vavonin'ny maro ilay hetsi-panoherana iray nanoherana ny tantara ratsin'ny familiviliana ny valim-pifidianana natao tao New York tamin'ny lohataona farany teo. Nanoratra [ko] i @hippietec: